Madaxwaynaha Cusub ee Somaliland oo lagu soo dhoweeyay Jabuuti | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha Cusub ee Somaliland oo lagu soo dhoweeyay Jabuuti
Madaxwaynaha Cusub ee Somaliland oo lagu soo dhoweeyay Jabuuti
Madaxwaynaha cusub ee maamulka gooni isu taaga ah ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta oo Sabti gaaray magaalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Muuse Biixi, madaxwaynaha Somaliland, iyo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin wasiirkiisa Arrimaha Dibadda Sacad Cali Shire iyo wasiirka Waxbarashada ayaa garoonka diyaaradaha Jabuuti waxaa Ku soo dhoweeyay madaxwaynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa.
Warbaahinta dalka Jabuuti ayaa Ku warantay in labada mas’uul at shir Ku yeesheen garoonka diyaaradaha Jabuuti kaasi oo la sheegay inuu hor dhac u yahay shir qorshuhu uu yahay in maalinta barri oo Axad labada mas’uul uu Ku dhex maro aqalka madaxtooyada Jabuuti.
Waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaa la sheegay inay ka mid yihiin arrimaha Ammaanka, Dhaqaallaha iyo kuwo kale.
Si rasmi ah looma oga waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan madaxwaynaha dalka Jabuuti iyo madaxwaynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi, hase ahaatee Ismaaciil Cumar Geele ayaa hormuud ka ahaa wada-hadaladdii istaagay ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland.
Muuse Biixi, ayaa dhowaan waxaa uu Ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday deeganada Somaliland, isaga oo doorashada kaga guulaystay musharixii xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Ciro.
Socdaalkiisa dalka Jabuuti ayaa waxaa uu noqonayaa kii ugu horeeyay tan iyo intii xilka loo doortay.
Previous articleShir dib u heshiisiineed oo lagu soo xiray degmada Doolow
Next articleAxsaab siyaasadeed oo eedayn u soo jeediyay NISA (Akhriso)